Barattoonni Yuunibarsiitii Adaamaa Mooraa Gad Lakkisanii Uummata Oromoof Dirmachuuf Karaa Jalqabuu Isaanii Himame | QEERROO
Barattoonni Yuunibarsiitii Adaamaa Mooraa Gad Lakkisanii Uummata Oromoof Dirmachuuf Karaa Jalqabuu Isaanii Himame
Posted on December 4, 2017 by Qeerroo
Dirmannaan Oromummaa uummanni keenya uummata Waraanni irratti banameef taasisu jabaatee itti fufee jiraachuu maddee keenya bakkoota hedduu ibsaa jiru. Akka maddeen arganneetti adda durummaan barattoonni Yuunibarsiitii dantaa dhuunfaa isaanii, barnoota jaallatan lafa kaahuun uummata isaanii bira dhaabbachuuf mooraa lakkisanii yaa’aa jiraachuu gabaasni torban darbee ifa godha. Haalli baruuf barsiisuu mooraa Yuunibarsiitii guutummaatti dhaabbatee kan jiru irratti, barattoonni gootonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo jalqaban galiin gahuun dalagaa qabnu mara lafa kaahuun qabsootti makamuu akka ta’e ibsuurratti argamu.
Kanas dhugoomsuuf adda durummaan barnoota isaanii dhaabanii waan dandaa’anii waraana uummata Oromoo irratti baname dura dhaabbachuuf imala jalqabanii jiru. Barattoonni Oromoo kunneen abdii ykn gargaarsa gama mootummaan Uummata Oromoo godhamu hedduu eegaa kan turaniif yeroo bal’aa mootummaa naannoo Oromiyaaf laatanis abdii uummata kanarraa waraana qolatu jedhu isaanirraa kutuun, qabsoo bilisummaa ABO dhaan durfamu jabeessun furmaata duraa ta’uu beekuun kobbeef qalama isaanii yeroof kaahuu murteeffatanii jiru. Haaluma kanaan barattoota Oromoof saboota cunqurfamoo mooraawwan
Hara Mayaa Yuunibarsiitii
Madda Walaabuu Yuunibarsiitii
Bule Horaa Yuunibarsiitii
Amboo Yuunibarsiitii fi kanneen kana fakkaatan mooraa lakkisanii bahuurra jiraachuuf hedduun isaaniimmoo bahanii juraachuutu himame.
Kanumaan bu’uura godhachuun barattoonni Yuunibarsiitii Adaamaas ganama har’aa irraa eegaluun uummata daangaarraan waraannni itti banameef dirmannaa gochuuf mooraa lakkisanii bahaa jiraachuu gabaasni keenya har’aa ifa godha
Oromoon Oromoo qaba, Wayyaaneen OPDO qabdi
Gama biroon Mootummaan Abbaa irree wayyaanee ammas tooftaa addaa uumuudhaan barattoota oromoo gidduutti walitti bu’iinsa uumuuf shira jabaa dalagaa akka jiru saaxilame.
Haaluma kanaan sirni wayyaanee kan hundeen dhaabbata isaa saamicha albuuda oromoon duroome yeroo ammaa Basaastoota meshaalee badii dhaqabsisaniin milkahuu erga dadhabeen tooftaa addaa tokkummaa barattoota oromoo diigu uummatee as bahee jira.
Shirri wayyaaneen torban kana keessa uummatee as ba’e kunis mooraa yuunibersiitii goleewwan oromiyaa keessa jiran keessatti tokkummaa barattoota oromoo diiguudhaaf karaa ergamtoota isaa holoola diigumsaa mancaasuun barattoota gidduutti wal shakkii uumuudhaaf abbalaa akka jirullee saaxilamaa jira.
olola mootummaan wayyaanee ittiin tokkummaa barattootaa diiguuf as ba’e keessaa adda durummaan barattoota oromoo sabboontota ta’an erga addaan baafateen booda addattimmoo barattoota adda durummaan hiriira qindeessu jedhee yaadu erga adda baafateen booda ebelu jaarmiyaa siyaasaa ebelu jedhamu waliin hojeta maallaqa diyaaspooraarraa ofiisaaf argata akkasumas faayidaa mataasaaf jecha dirqamaan barattoota qindeessaa jira jechuun barattoota jidduutti garagarummaa jabaa uumu irra darbee hanga wal miidhuutti gesisaa akka jirullee saaxilamaa jira. Kun ammoo tokkummaa barattoota oromoo diiguurra taree walqoodinsa, shakkiifi kkf barattoota oromoo saaxilaa akka jiru himamee jira.
Wayaaneen umurii aangoo ishee dheerefachuuf holola hamaa kana barattoota oromoo gidduutti tamsaasuudhaan caalmaattimmoo kana summii ilmaan oromoo gidduutti biifaa akka jirtu himamaa jira.
Kanaaf, baratan oromoo kamiyyuu shira wayaanee kana tokkummaan irratti dammaquun holola ergamtoota sirna wayyaaneef osoo gurra hin ergisin tokkummaa isaa kan yeroo kamiiyyuu caalaatti gad jabeessuun falmaa mirga abbaa biyyummaa jalqabame akka itti fufsiisu qeerroon mooraa yuunversiitiilee garaa garaa dhaamsa oromummaa dabarfatanii jiru.
Warraaksi biyyoolessaa fxg godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti itti fufee jira.
Yuunversiitii Riifti vaalii Damee Naqamtee keessatti diddaan barattootaa kan jalqabame daran baballachuun magaalaa Naqamtee dhuunffatee jira.Gootowwan barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii riifti vaalii Damee naqamtees tokkummaadhaan walitti dhufuun sagalee isaanii dhageessifachaa oolanii jiru.
Ka’umsa diddaa kanaaf sababni guddaan waggaan barnootaa barattoota riifti vaalii irratti shira mootummaa wayyaanee waan dabalameef barattoonnis hin barannu jechuun akka diddaa dhoosantu gabaafame.
Mootummaan wayyaanees akkuma amala isaa barattoota karaa Nagaatiin gaaffii mirgaa gaafatan irratti dhukaasa banuudhaan barattoota addaan tamsaasee jira.
Kanumaan walqabatees Barattoonni nagaan heeddumminaan ostuu waraana wayyaanee dheessanii kukkufuudhaan akka mada’anii jiranillee maddi oduu Qeerroo leeqaarraa dhufaa jiru ibsee jira.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii fi naannoo ishee keessattis warraaksi biyyaalessaa dhohee jira.
Guutummaan magaalaa Mandiis diddaadhaan dhuunffatamtee jirti.
Uummanni magaalaa Mandii fi naannoo ishees tokkummaadhaan walitti dhufuudhaan sirna wayyaanee balaaleffachaa jiru.
Mootummaan wayyaanees waraana isaa gara uummataatti jumlaan bobbaasaa jira.
Gootowwan qeerroo fi qarree akkasumas uummanni magaalaa mandiis sodaa waraana wayyaaneef osoo hin jilbeenffatiin gaaffii mirga Abbaa biyyummaa gaafachuu isaanii daran jabeessuun itti fufanii akka jiranillee maddeen qeerroo mandiirraa dhufan gabaasanii jiru.
1 thought on “Barattoonni Yuunibarsiitii Adaamaa Mooraa Gad Lakkisanii Uummata Oromoof Dirmachuuf Karaa Jalqabuu Isaanii Himame”
Pingback: Barattoonni Yuunibarsiitii Adaamaa Mooraa Gad Lakkisanii Uummata Oromoof Dirmachuuf Karaa Jalqabuu Isaanii Himame – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA